🥇 ▷ Huawei Mate 30 ayaa lasiiday! Halkan Muuqaalada iyo Qiimaha ✅
Huawei Mate 30 ayaa lasiiday! Halkan Muuqaalada iyo Qiimaha
Huawei wuxuu soo bandhigayaa qaabka cusub ee casriga, Huawei Mate 30. Huawei Mate 30Waxaan kuu diyaarinay dhammaan faahfaahinta farsamo iyo qiimaha adiga kuu gaar ah. Aynu si dhow u eegno qeexitaanka iyo qiimaha Huawei Mate 30.
Huawei Mate 30 Faahfaahin
Huawei waxay soo bandhigtay moodello casri ah oo cusub iyo alaabo kale munaasabad khaas ah oo ka dhacday Munich, Germany. Huawei Mate 30 wuxuu muujiyaa 6.62 inji oo AMOLED ah. Chips-ka cusub ee Huawei wuxuu soo saaray IFA 2019 Kirin 990Mate 30 wuxuu leeyahay 6GB / 8GB oo RAM ah iyo 128GB kaydinta gudaha ah. Qalabka wuxuu taageeraa tikniyoolajiyada 5G.
Huawei Mate 30Dhabarka waxaa ku yaal afar dareemayaal kamarado ah. Dareemayaasha kamaradaha waa sida soo socota: 16 megapixel camera angle angle angle oo leh f / 2.2 aperture, 40 megapixel ballaaran xagal weyn oo leh f / 1.6 aperture iyo 8 megapixel telephoto camera leh f / 2.4 aperture iyo dareeraha diiradda laser.
Huawei Mate 30 wuxuu ku ridi karaa 720p fiidiyowyo mooshin ah oo ah 7680 fps. Qalabka wuxuu ku qabsan karaa 1080p fiidiyow ah 960 fps. Huawei Mate 30Kaameeradu waxay taageertaa muuqaalo badan oo ay kujiraan sawir xawaare aad u sarreeya, sawir qaadis heer sare ah iyo toogashada TimeLapse
Dhanka hore ee taleefanka casriga ah waa 32 Megapixel camera sensor leh a fuuda f / 2.0. Huawei Mate 30Waxay taageertaa 4200 mAh batari iyo 40 Watt Huawei SuperCharge technology.
Huawei wuxuu sheegay in Mate 30 ay taageerto 27 Watt teknoolojiyadda degdegga ah ee birta ah. Aaladda degdegga ah ee wireless-ka kama soo baxdo sanduuqa. Mate 30, Android 10 nidaamka ku saleysan EMUI 10 nidaamka hawlgalka. Qalabka ma laha adeegyo Google.
Huawei Mate 30 Qiimaha
Waxaa lagu heli karaa afar midab oo kala duwan, madow, cagaar, guduud iyo cawlan Huawei Mate 30Qiimaha ugu horreeya ee iibinta dibedda waa $ 799.